Khariidadaha isku dhafan | Saadaasha Shabakadda
Khariidadaha isku dhafan
A. Esteban | | Saadaasha hawada
El khariidad isku mid ah (ama sidoo kale loo yaqaan jaantus synoptic) waa matalaad muuqaal ah oo ku saabsan heerka cadaadiska cimilada ee heerka badda. Isgoysyada u dhigma khadadka cadaadiska loo siman yahay waxaa qaata khubarada saadaasha hawada 4tii hektarbaasal ee kasta ee adeegyada saadaasha hawada ee dalalka qaarkood (sawirka sare) iyo 5 hectopascals kasta oo kale (sawirka hoose). Marka laga reebo isobars nidaamyada hore iyo xarumaha cadaadiska sare iyo kuwa hoose ayaa lagu muujiyey jaantuska.
Aynu hadda eegno qaar ka mid ah walxaha aasaasiga ah ee lagu aqoonsan karo khariidadaha isku dhafan:
1. The Isobars
Waxay u dhigmaan khadadka ku soo biiraya dhibcaha isku midka ah cadaadiska cimilada. Qiimaha cadaadiska Hawada oo matalaya mid kasta oo ka mid ah ayaa lagu muujiyey khadka. Tusaale ahaan, khariidadda madow iyo caddaan qiimaha isobar ee ka gudba Jasiiradaha Balearic waa 1025 Hpa.
2. Xarumaha Cadaadiska Hoose
Waxay u dhigmaan qaab-dhismeedka isobars wareegsan oo ka badan ama ka yar oo ku wareegsan xarun ay cadaadiska hawadu ku jirto ugu yar. Badanaa waxaa lagu calaamadeeyaa xarfaha B (squall) ama L (low press), sidoo kale T. Waxay caadi ahaan la xiriiraan xaalado cimilo xumo, roob iyo duufaanno.
3. Xarumaha Cadaadiska Sare
Waxay u dhigmaan qaab-dhismeedka isobars wareegsan oo ka badan ama ka yar oo ku wareegsan xarun ay cadaadiska hawadu ku jirto ugu badnaan. Lagu calaamadeeyay A (cadaadis sare) ama H (saxaafad sare). Waxay caadi ahaan la xiriiraan cimilada wanaagsan.
4. Jabhadaha Qabow
Ku calaamadeysan khadadka jajaban ee buluugga ah, waxay muujinayaan hore u socodka tirada Hawo qabow taas oo keenta roobab guud iyo hoos u dhac ku yimaada heer kul marka ay soo baxaan.
5. Jihooyinka Diiran
Waxaa lagu calaamadeeyay xariiqyo xudduud u leh wareegyada wareega ee guduudka, waxay muujinayaan hore u socodka tirada hawo diiran taas oo keenta roobab iyo kor u kaca heerkulka markay soo socdaan.
6. Aagagga ay ka maqan yihiin
Waxaa lagu muujiyey astaamaha isku dhafka hore ee diiran iyo mid kale oo ah hore qabow iyo guduud. Waxay tilmaamayaan khadka kulan inta u dhaxeysa hore qabow iyo hore diiran. Badanaa waxay la xiriiraan roobab culus.
source: Wetterzentrale, MetOffice
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Khariidadaha isku dhafan
Putote, macluumaad been abuur ah iyo nacas nacas ah
Shucaaca dhulka dushiisa
Waa maxay lakabka xuduudu?